Qarax Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Gobolka Baay – XAMAR POST
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in meel duleedka ka ah deegaanka Goofgaduud ee Gobolkaas uu ka dhacay qarax khasaaro geystay.
Qaraxaan oo ahaa miinada mooca dhulka lago aaso ayaa waxaa ay la kacday Gaari dameer ay saarnaayeen Haweeney iyo Seygeeda,kuwaas oo kusoo jeeday Magalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay. Kana yimid deegaanka Goofgaduud.
Wariyaheena Gobolka Baay Muqtaar Aadan Dalmar ayaa soo sheegaya in deegaanka qaraxa miino uu ka dhacay lagu Magacaabo Haweenka,isla markaana 8km uu duleedka ka xigo deegaanka goofgaduud oo hoostaga Magalada Baydhabo.
Haweeney iyo seygeeda oo Gaari Dameerka watay ayaa ku Dhaawacmay qaraxaas,waxaana dhaawacooda la geeyay Isbitaalka Weyn ee Magalada Baydhabo,waxaana wariyaheena uu soo sheegayaa in dhaawaca ninka uu yahay mid culus.
Inta badan wadada xiriirisa Magalada Baydhabo iyo deegaanka Goofgaduud ayaa waxaa qaraxyo lagula eegtaa Ciidamada dowladda ee mararka qaar wadadaas isticmaala.